Abaalmarinta McKnight Scholar waxay dhiirigelinaysaa neurosuusyada marxaladaha hore ee xirfadahooda si ay diirada u saaraan xanuunada barashada iyo xasuusta.
Abaalmarinta Billaha ah waxay taageertaa saynisyahanno yaryar kuwaas oo: haysta MD iyo / ama Ph.D. shahaadada; waxay soo buuxiyeen tababarka rasmiga ah ee rasmiga ah; iyo muujiyaan ballanqaad ku saabsan neuroscience. Sanduuqa Maaliyadda ayaa si gaar ah u raadinaya codsadayaasha ka shaqeeya dhibaatooyinka, haddii lagu xaliyo heerarka asaasiga ah, waxay yeelan doonaan saameyn deg-deg ah oo muhiim ah oo ku saabsan arrimaha la xariira caafimaadka.
Macalimiinta McKnight waxay soo saareen natiijooyin muhiim ah oo ku saabsan neuroscience, oo ay ka mid yihiin:
Soo helitaanka duubayaasha qabta dareenka urta, dhadhanka, iyo xanuunka kuleylka.
Qaab dhismeedkii kowaad ee kanaalka ee mid ka mid ah kanaalka iyio oo xakamaynaya xiisaha nuurooniga.
Soo helitaanka waxyaabaha keena neurotrophic ee kor u qaadista badbaadada nuuroonta.
Aqoonsiga maadiinnada kor u qaadaya kobaca axonka iyo dib u soo kabashada nidaamka dareenka.
Soo helitaanka borotiinka ee ku yaala garabka dareenka ee dhexdhexaadinta sii deynta nurotransmitters.
Aqoonsiga hidaha ee xakamaynaya xusuusta gaaban iyo kuwa muddada fog.
Sannad kasta, ilaa lix aqoonyahanno ayaa loo doortay si ay u helaan taageerada saddexda sano ah. Xilligan, abaal-marintu waa $ 75,000 sanadkiiba. Lacagta waxaa loo isticmaali karaa si kasta oo u sahlaysa horumarinta barnaamijka cilmi-baarista ee Scholar, laakiin maaha kharashyada aan tooska ahayn.
Abaalmarinta Ardayda waxaa la siiyaa sannad walba illaa 1977-ka. Waxay ahaayeen machadka McKnight Foundation ee ugu horreyn ee lagu taageerayo cilmi-baarista neurosiyaanka. Sanadkii 1999-kii, dib-u-habeynta barnaamijka abaal-marinta, guddiga deeq-bixiyeyaasha ee Maaliyadda ayaa sii waday Abaalmarinta Scholar, laakiin hadafka cusub ee lagu xalinayo dhibaatooyinka ka imaanaya saameynta caaņmaadka ee dhow.